Amathiphu Ukuze Okuhambayo Europe Alone ngu zemininingwane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Amathiphu Ukuze Okuhambayo Europe Alone ngu zemininingwane
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 06/10/2020)
Okuhambayo Europe ngesitimela ingenye enhle kunazo, kulolu hambo ebabazekayo namasiko emhlabeni. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna izitimela okuqondile phakathi emadolobheni amakhulu European like entsha London Amsterdam ukuqeqesha noma ufuna romantic isitimela kulolu hambo, European isitimela sokuvakasha has konke.
Inani labantu interrailing ngokusebenzisa Europe ngonyaka kuba 400,000 abantu. Ungavakashela phezu 30 amazwe besebenzisa amathikithi interrailing. Njengoba interrailing kwaqala ngo 1972, izigidi zabantu ziye wadabula Europe ngokusebenzisa le ithikithi elilodwa wesitimela.
Ukuhamba yonkana Europe ne ithikithi elilodwa iza ubuhle nobubi bayo. Kukhona amasayithi eziningana inthanethi anikezelwe amathiphu zabahamba abafuna ukubona Europe ngesitimela. Lawa masayithi zihlanganisa umzila Planner zokusebenza namawebhusayithi / namabhulogi ukuthi ukukunikeza amathiphu indlela yokwaba.
Okuhambayo EYurophu iyodwa
Ukuhamba udlula Europe wedwa has a eziningi izinzuzo. Lapho uwedwa, wena ukulawula ngokuphelele yakho uhambo.
Ukuba wedwa kukunika ithuba lokunquma uhambo lwakho siqu, dlanini konke ukudla ofuna futhi lapho ufuna futhi ugweme ukuxabana nabanye abantu ngohambo lwakho,
inkululeko enjalo ingaholela ukuzinyeza ukutholakala kanye ithuba lokuphinde ngihlangane nabanye abantu abasha kanye nezinye abayimizulane, ngenkathi reinventing ngokwakho. Lokhu solo isipiliyoni kungaholela self-ukukhula.
Dortmund ukuze Hanover Izitimela
Essen ukuze Hanover Izitimela
Bonn ukuze Hanover Izitimela
Luxembourg ukuze Hanover Izitimela
kokuba umngane nawe lapho usohambweni, ukunika umuntu ukwabelana izinkumbulo zakho nge, Yikuphi ingxenye enkulu enqamula Europe.
Lapho enqamula EYurophu iyodwa uzame ukuhlala amahostela.
Emahostela zigcwele abantu abenza solo enqamula Europe, Ngakho bachithe futhi ukuhlangabezana nabantu.
Zama ukuba njengoba friendly naphumayo ngangokunokwenzeka lapho ohamba yedwa futhi Uma umuntu unkom 'idla yodwa, uzodinga sense imizamo khudlwana ukuba nobungane nezinye izihambi. Kungathatha izinsuku ezimbalwa ukujwayela kokuba evulekile friendly, kodwa iyobe iwufanele isikhathi sakho njengoba uqala ukuthuthukisa ukuxhumana ngokubhanqwa abahambi nabo.
It is ibuye Kunconywa ukupheka ukudla ku ehostela, ezizohlinzeka ematfuba lamanyenti unabanye.
Uma unesithakazelo ngaphezulu ukuhlangana bendawo kunamanye abahambi, ke Couchsurfing kungaba indlela enhle ngawe.
Couchsurfing, okuhlanganisa amabhara sawo imigoqo kanye ezinkantini izoxhumanisa amasiko endawo futhi kubuye ithuba ukuhlangabezana expats.
Kukhona ezinye amadolobha aseYurophu lapho kukhona okuningi pickpockets nezinye izinhlobo izigilamkhuba zingafuna ukuthatha inzuzo zezivakashi, Sebenzisa siqu umuzwa wakho ezivamile futhi ufunde travel izinkundla noma yimiphi imininingwane efanele ukuze ubone izindawo nabantu ukugwema.
Ukuze uthole amanani angcono ukuhamba yeziNguquko eYurophu ngemvume ukuze yethu iwebhusayithi manje. Thatha 3 imizuzu ukuqedela ukubhuka ithikithi isitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspain-by-train%2F - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / ku / fr noma / futhi ngezilimi ezingaphezu.
#Nomad Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi traveltips